कृष्ण र कर्णको कुराकानीः जीवन तथ्य « LiveMandu
१३ चैत्र २०७५, बुधबार ०६:००
आज लाइभमाण्डुमा भागवत गीताको कृष्ण र कर्णको वार्तालाप र जीवन तथ्य लिएर आएका छौं । जीवन कसैको लागी समान छैन, आउँनुहोस आज सुनौं कर्णको प्रश्नमा कृष्णका ब्यबहारीक उत्तरहरु ।
कर्णले कृष्णलाई प्रश्न गर्दछन्, हे कृष्ण के अवैधानीक बालकका रुपमा जन्मनु मेरो दोष हो र ? मातृवालत्सय पाउनु त कहाँ हो कहाँ मलाई मेरी आमाले जन्मनासाथ त्याग गर्नुभयो । यस्तो किन कृष्ण । मैले गुरु द्रोणाचार्यबाट शिक्षा लिन पाइन किनभनें म क्षत्रीय थिइन, यसकुरा बुझेर परशुरामले मलाई गैरक्षत्रीय भनेंर शिक्षा त दिनुभयो तर जब म कुन्तीको छोरा हो भन्ने थाहा पाउनुभयो तब सिकेको सबै कुरा भुल्ने गरि श्राप दिनुभयो, आखिर यो अन्याय किन मलाई कृष्ण ?
मेरो वाणले अनाहक र दुर्घटनावश एउटा गाईमा प्रहार भयो, उक्त गाईको मालिकले मेरो कुरा नुबझि र मेरो वाणको आशय नबुझि मलाई श्राप दिए । द्रोपतिको स्वम्बरमा पनि म अनाहकमा मुछिँए । आमा कुन्तीले पनि मलाई विन्तीभाउ गरि आफ्ना अरु छोराहरु जोगाउन भन्नुभयो अनि मैले जति सम्मान र स्वाभिमान पाँए त्यो यता दुर्योधनको पक्षमा हुँदा मात्र मैले पाँए । अब के म गलत हुँ ?
कर्णको यो भनाँई सुनेर कृष्णले उत्तर दिन्छन् ।
हे कर्ण म त झन जन्मन अगावै मेरो मृत्युले मेरो जीवनको पहरा दिइरहेको थियो, म एउटा कारागारमा जन्मेँ । जन्मना साथ मैले मेरो जन्मदाता आमाबुवालाई त्याग्न पर्यो, म उनीहरुभन्दा पर अर्कै परिवार र परिवेशमा हुर्कें । कर्ण तिमी त जन्मदाँ साथ घोडा, तरवार, रथ र युद्धको आवाज सुनेर हुर्कियौ तर मैले बालापनमा गाईको गोबर, पराल, गोठ र बस्तुभाउको आवाज सुनेर हुर्किए । तिमीलाई थाहा छ कर्ण ? म जन्मन अगावै र हातगोडा चल्न अघि नै मेरो हत्याका धेरै योजना र हत्याका क्रियाकलापहरु भइसकेका थिए । न कुनै सेना या सैन्य अभ्यास या न कुनै औपचारीक शिक्षा, मलाई त सबै गाँउलेहरुले तिनीहरुको समस्याको जड नै म हो भनेर आरोप लगाँउथे । जब तिमी आफ्नो बहादुरीताको लागि गाँउभरमा कहलिएका थियौ नि कर्ण हो त्यतीबेला मैले कतैबाट शिक्षा सम्म पाएको थिइन, गुरुतत्वको साक्षात्कार नै मेरो जीवनमा भएको थिएन । मैले गुरु सान्दीपानीको गुरुकुलमा केवल १६ वर्षको उमेरमा मात्र भर्ना हुने मौका पाँए । कर्ण तिमीले त आफुले मन पराएको कन्यासंग बिवाह गर्यौ तर मेरो बिवाह आफुले चाहेको संग त भएन तर ती संग भयो जसलाई मैले राक्षसहरुसंग बचाएँ ।
मैले मेरो सबै समुदायलाई यमुनाको किनारबाट समुन्द्रको तटमा जरासन्दको भयले सार्न पर्यो । मलाई सबैले डरपोक भनें । यो युद्ध दुर्योधनले जिते भनें त तिमीलाई धेरै सम्मान दिइनेछ तर मेरो सोच यदि धर्मराजले जिते भनें पनि मैले केहि पाउनेछैन । बरु मलाई उल्टै अब इतिहासले युद्धका सम्पूर्ण नकारात्मक असरका लागि हजारौं वर्ष सम्म गाली गर्नेछ ।
एउटा कुरा याद गर कर्ण, यो जीवनमा सबैको लागि फरक फरक खाले चुनौति हुन्छ । आफ्नो चेतनाले धर्म र सत्यको बाटो रोज्न जरुरी छ । अफ्ठेरो पर्नु स्वभावीक हो तर उक्त समस्याको समयमा कसरी हामीले सामना गर्दछौं चाँही महत्वपूर्ण कुरा हो । जीन्दगीको चुनौती र असमानताका कारणले गलत बाटो रोज्न पाउने अधिकार कसैलाई छैन, सँधै संझना गर कि जीवन घरि घरि अफ्ठेरोमा पर्दछ तर जीवनको गन्तब्य हामीले लगाएको जुत्ताले हैन तर जीवनमा हामीले लिएका कदमले निर्धारण गर्दछन् ।
यति भनेपछि कर्ण चुप भए ।